Darejena - Wikipedia
Tarisai futi peji re Mazita e Nhangande uye Tafura ye rupoterera
Darejena (ku chingezi: silver) kana sirivha kutora izwi re chingezi, isimbi ne nhangande ye mushonga yakakosha. Simbi iyi inoshandiswa kugadzira muzvishongo zvinenge mhete, mari, chiringira nezvimwewo.
Chiratidzo che dare jena ndi Ag (kana dj, tikashandisa zita rayo mu Chishona chete), ine numeri ye atomu 47 painoiswa mu tafura ye rupoterera. Darejena ine huremu hwe atomu hwe 107.86. Ino nyauka ku 1234,93 K (961,78 ° C ) uye inofanza ku 2435 K (2162 ° C).
Zita rekuti darejena riri kubva pakuti pachiVanhu tinoshandisa darejena kureva ruvara rwesimbi iyi. Semuyenzaniso kuti "Ndabayiwa nebanga darejena" asi hatishandisi darejena tichida kuti mwerechena zvichiratidza siyano yemavara aya.
Numeri ye atomu
Huremu hwe atomu
Chibuza che kunyauka (chibuza (point)
Chibuza che kufanza
↑ Vashona, 24 Gumiguru 2019, "chibuza" Yakatariswa: 16 Nyamavhuvhu 2021
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Darejena&oldid=88842"
Last edited on 16 Nyamavhuvhu 2021, at 06:17
This page was last edited on 16 Nyamavhuvhu 2021, at 06:17.